521 - 540 of 1000 African News Headlines Page 27 of 50 Pages
Aust boosts humanitarian aid to Zimbabwe
The Federal Government has announced it is boosting foreign aid to humanitarian organisations in Zimbabwe by $8 million. It brings Australia's total contribution to Zimbabwe to $20 million this financial year. The Government says food and water ... more
Australia gives $8m to Zimbabwe
Zimbabwe .com.au GetThis(T, C, U, L) 'undefined' media_form request to media Welcome to . Skip to: Breaking Owner Sense Advice Home /PDA The n NT s 'undefined' media_form false) gives $8m to Zimbabwe By staff writers and wires November 25, 2008 ... more
"Zimbabwe at the Edge of Collapse"
While the political deadlock between the rival groups shows no sings of resolution in the near future, the socio-economic conditions of the Zimbabwean people have gradually worsened leaving the country at the edge of a major humanitarian problem. ... more
Zimbabwe may soon collapse says Annan
By Paul Simao Zimbabwe could collapse within months due to its political and economic crisis, South Africa's ruling party leader said on Monday, citing former U.N. Secretary-General Kofi Annan and other prominent figures. African National Congress ... more
Letters: Obama and Zimbabwe
Obama brings hope to the oppressed in Zimbabwe Search Search Go Independent.co.uk Web Bookmark & Share It must have been a great relief to many world leaders when Barack Obama recently won the presidential race. The many congratulatory calls that ... more
Zuma: We must act now on Zimbabwe
Zimbabwe could collapse within months, warns Zuma
ZIMBABWE could collapse within months due to its political and economic crisis, South Africa?s ruling party leader said, citing former UN secretary-general Kofi Annan and other prominent figures. African National Congress (ANC) leader Jacob Zuma said ... more
There seems no respite on the horizon. The longer the politicians bicker, the more lives are being sacrificed.? Zimbabwean journalist, unidentified for fear of reprisals Three months after the elections that offered a brief glimmer of hope, ... more
Zimbabwe may soon collapse due to crises: Annan, Carter
TWN, By Paul Simao, Reuters JOHANNESBURG -- Southern African nations must intervene more decisively to end Zimbabwe's political and economic crisis, former U.N. Secretary General Kofi Annan and other prominent world figures said on Monday. ... more
Zimbabwe situation 'may implode'
South Africa's president warned that the situation in neighbouring Zimbabwe 'may implode and collapse' and announced a new round of talks to help resolve the crisis. The comments, some of the strongest yet by South Africa, come as a cholera epidemic ... more
HARARAE: A match reduced to 28 overs produced the series' most compelling game in Harare, and the first performance by Zimbabwe to cause Sri Lanka a headache. Hamilton Masakadza's pleasantly carefree strokeplay took Zimbabwe to within touching ... more